Tag: ụlọ oriri na ọ |ụ |ụ | Martech Zone
Tag: ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ
Anyị keere òkè na FlockTag, usoro iguzosi ike n'ihe na ụgwọ ọrụ maka ụlọ ahịa kọfị na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ nke na-enyere aka ịchụpụ ndị ahịa. Nhazi ịntanetị, ndoputa ịntanetị, nyocha intaneti, mgbasa ozi mmekọrịta, akwụkwọ ikike dijitalụ, nchọpụta mpaghara… teknụzụ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'otú anyị si achọta na ebe ndị a na-agakarị iri nri. N'ezie, National Restaurant Association na-akọ na 45% nke ndị na-azụ ahịa ahọrọlarị ebe ha ga-eri nri na-eji ngwa ọrụ n'ịntanetị. Na 57% nke ndị nlekọta na-eji ntanetị
Mgbe m kwuru okwu na San Diego na Social Media Trolls, Crisis and Blunders, akụkụ kachasị mkpa n'okwu ahụ dum bụ egwu na-enweghị isi nke na-eme site na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe ọ bụla ụlọ ọrụ kwụsịrị. Ọkara ndụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta kpọmkwem otu ụlọ ọrụ na-esote ọpụpụ ngwa ngwa. Na nke ahụ na-eme minit ole na ole ugbu a. Niile uzu izu a bụ post na Amy's Baking Company na Scottsdale, Az.
nBA nghọta: Actionable Social Business ọgụgụ isi
newBrandAnalytics na-ewepụta usoro ọgụgụ isi mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ile ọbịa, gọọmentị na ụlọ ahịa ndị ahịa. Ha kọwapụtara ma nyochaa ọtụtụ nzaghachi nke mgbasa ozi mmekọrịta ma sụgharịa ya n'ime nghọta arụmọrụ na mpaghara, mpaghara na ọkwa maka ndị ahịa ha. Nke a bụ nkọwa nke otu esi eji nBA eme ihe na Industrylọ oriri na ọ Resụ Resụ: nBA Insight na-anakọta ma na-edozi ọtụtụ usoro mgbasa ozi ọha na eze na-adịghị edozi maka azụmahịa gị na mpaghara, mpaghara, na ọkwa ọkwa, ka i wee nwee ike